Madaxweyne Farmaajo oo Shir Guddoomiyey Kulan looga hadlaayey dib u eegista Dastuurka dalka | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Farmaajo oo Shir Guddoomiyey Kulan looga hadlaayey dib u eegista Dastuurka dalka
MUQDISHO – Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta shir guddoomiyay kulan looga hadlayay dardar gelinta arrimaha dib u eegista Dastuurka Dalka, kaasi oo la filayo in dhawaan loo bandhigo dadweynaha Soomaaliyeed.
Kulankan oo ka dhacay Madaxtoyada ayaa waxa goob joog ka ahaa guddoomiyeyaasha Golaha Shacabka iyo Aqalka sare, kusimaha Ra’iisul Wasaaraha, Wasiirka Dastuurka, guddiga la socoshada dib u eegista dastuurka ee labada aqal iyo Guddigii madaxa banaanaa ee dastuurka waxaana looga hadlay sida ugu wanaagsan ee looga mari dhalin karo dib uu egsita qabyo qoraalka dastuurka.
Muddadii uu kulankaasi socday ayaa waxaa siweyn looga hadlay sidii loo heli lahaa Dastuur dhameystiran oo uu Dalku yeesho ka hor dhamaadka sanadka 2018-ka si bulshada Soomaaliyeed ay aftidooda uga dhiibtaan dastuurka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxmaed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Hay’adaha Dastuurka dalka looga fadhiyo in hab iskaashi ah looga mira dhaliyo howsha dib u eegista dastuurka si shacabku codkooda wax ugu doortaan mustaqbalka dhaw.
Gudiyada ayaa sidoo kale lagu booriyey in arrimaha dib u eegista Dastuurka Dalka in ay wadashaqeyn dhow ka yeesheen sidii loo dardar gelin lahaa arrimahaasi waqti dhowna la soo afjaro dib u eegistaasi Dastuurka oo muhiim u ah doorashooyin ka dhacidoona Dalka.